Yangon | မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ မှ အချိန်ပိုင်းအလုပ်အမျိုုးအစား သုတေသန၊ သင်ကြားရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေး အလုပ်အကိုင်များ | MyJobs
Yangon ရှိ မှ အချိန်ပိုင်းအလုပ်အမျိုုးအစား သုတေသန၊ သင်ကြားရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေး အလုပ်အကိုင်များ
Research Trainee -2Posts (M/F)
Deliver subject matter expertise in business and mentor students throughout their learning journey. Deliver and Support blended learning pedagogy to our learners to achieve superior learning experience and successful skills outcome
Deliver subject matter expertise in business and mentor students throughout their learning journ ...
Digital Marketing Trainer/ Lecturer
Deliver subject matter expertise in Digital Marketing and mentor students throughout their learning journey. Deliver and Support blended learning pedagogy to our learners to achieve superior learning experience and successful skills outcome
Deliver subject matter expertise in Digital Marketing and mentor students throughout their learn ...
Computing / Programming Lecturer (Part-time : Weekend)
Computing/ Programming Lecturer (Part-time : Weekdays)
ရှိ ထိပ်တန်းကုမ္မဏီများမှ အချိန်ပိုင်းအလုပ်အမျိုုးအစား သုတေသန၊ သင်ကြားရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေး အလုပ်အကိုင်များ ကိုရှာဖွေလိုက်ပါ။ အွန်လိုင်းမှအလွယ်တကူလျှောက်ထားပြီး အလုပ်အသိပေးချက်များအတွက် စာရင်းသွင်းလိုက်ပါ။